Ogaden News Agency (ONA) – Riwaayadaha Dibadda loo Alifo Sidee loo Jilaa – Xuseen Noor
Riwaayadaha Dibadda loo Alifo Sidee loo Jilaa – Xuseen Noor
Posted by ONA Admin	/ June 13, 2017
Waxaan soo sheegnay riwaayadaha gumaysiga alifayo ee kooxda Jigjiga ay jilayaan si dadweynaha loogu sawiro inay iyaga dalka xukumaan, ka dib markuu gumaysiga u fasaxay Cabdi iley iyo kooxdiisa inay dilaaan qofkay doonaan oy dhacaan qofkay doonaan. Ujeedada gumaysiga uu ka leeyahay adeegsiga qaar ka mid ah shacabka la gumaysto waxaan ku sheegnay inay ka mid tahay tabaha ay gumaystayaasha adeegsadaan markay ku jabaan dagaalka ay kula jiraan dhalinyarada gobanimadoonka ah oy ka quustaan inay shacabka ka niyad jabiyaan rabitaankooda xoiyadda.
Calooshood u shaqaystayaasha (Mercenaries) uu gumaysiga adeegsado meel kastoy joogaanba waxay ka midaysan yihiin markay fursad u helaan inay colaada xad dhaaf ah kula dhaqmaan shacabkooda. Laba arin ayaana sabab u ah.
habka loosoo xulo colooshood u shaqaystayaasha u adeega gumaysiga oo ah in laga soo ururiyo qaybaha ugu hooseeya bulshada -dhaqaale ama dhaqan ahaan- oo inta badan u cadhaysan bulshada ay la noolyihiin.
Ka dibna marka awood la siiyo ay kaga aargoosan karaan qofkay doonaan bulshada si naxariisdara ah u laaya una bahdala.
Markay arintaa u hirgasho gumaysiga, oo kooxdii uu soo ururiyay ay bahdilaan bulshada, waxaa ku biira adeegayaashii gumaysiga dhalinyaro ka cabsanaya kooxihii lasoo ururiyay ama ka gadooday oo ka cadhaysan habka kuway garanayeen ee hoosta laga soo qaaday ay ula dhaqmahayaan bulshada.
Silsiladaa isku xidhan ee gumaysiga uu adeegsado oo ka mid ah nidaamka uu gumaysiga kula dagaalamo shucuubta gobanimadoonka ah ayuu gumaysiga Itobiya adeegsaday, mana ah qorshe ay dajiyeen kooxda Cabdi iley ee loo adeegsanayo fulinta qorshahaa. Hadaan intaa ku dhaafno barnaamijka ka socda gudaha oon isku dayno in aan sidoo kale yarehe ifino Riwaayadaha loo alifay jaaliyada dibadda iyo sida loo jilayo.
Doorka ay jaaliyadaha Ogadenya ee caalamka ku baahsan ku leeyihiin halganka gobanimadoonka shacabka Ogadenya ma aha mid ka qarsoon gumaysiga. Ururka TPLF ee xukuma dalka Itobiya wuxuu ahaa urur soo jabhadeeyay oo dagaal ku qabsaday xukunka. Sidaa darted, iyagoo ka duulaya aqoonta ay u leeyihiin doorka ay ku lahaayeen jaaliyadaha Tigreega guusha ay gaadheen iyo xidhiidhkii ka dhexeeyay halganka ay gudaha ka wadeen iyo midkii dibadda ay jaaliyadahooda ka wadeen, ayay go’aansadeen in dagaalka ay kula jiraan ONLF ee gudaha Ogadenya ka socda aan lagu guulaysanayn hadaan dibadda loo rarin dagaalka. Waxay dajiyeen qorshe kooban oo saldhigiisu yahay in la abuuro koox u dhigma kuwa gudaha ka dagaalamaya oo dibadda kula dagaalama ONLF. Si loo helo koox/ciidan qarsoon oo dibadda kula dagaalama ONLF, waxaa la diyaariyay riwaayado kala magac duwan oo isku ujeedo ah. Eray bixinada loogu yeedhayay riwaayadahaa waxaa ka mid ahaa;
UWSLF iyo Itobiya oo gaadhay Heshiis taariikhi ah.
Garabkii ugu weynaa ONLF oo hubka dhigay/nabad qaatay.
Wafdi balaadhan oo ka socda xubnaha ONLF oo tagay Jigjiga.
Qurbajoogta iyo horumarka uu gaadhay dalka.
M/weynaha DDS oo la kulmay jaaliyadda DDS ee dalka …
Dhul beereed iyo dhismo la siiyay Qurbajoogta.
Riwaayadahaa oo miisaaniyad badan ay ku bixisay Itobiya waxay ogaatay muddo ka dib in kuwa lagu sheegayay Qurbajoogta ee wax ka jilayay riwaayadda aanay ahayn kuwii la doonayay ee xubnaha ka ahaa ururka ama ahaa taageerayaasha halganka. Waxay ogaatay Itobiya inuu Janankii xukumay gobolka ee Abraha iyo Cabdi iley ay riwaayad si fiican loo jilayay u dhigeen dawladda Itobiya oy kaga qaateen malaayiin doolar. Socdaaladii badnaa ee Cabdi iley dibadda loogu soo dirayay si loosoo afjaro taageerada jaaliyadaha waxay kusoo afjarantay siday ku qiimeeyeen sirdoonka iyo safaaradaha Itobiya guuldaro, marka la qiimeeyo kharashka ku baxay iyo waqtiga iyo juhdiga la galiyay. Markay qiimeeyeen waxaa lagu go’aamiyay in hab kale loo badalo riwaayadda oo dadka jilaya ay noqdaan qaar isa soo muujiya marka hore intaan la maalgalinin.
Riwaayadaa Is-muuji aan ugu magacdarnay iyo Jilayaasha cusub habka loosoo xulo ayaan kaga hadli doonaa qaybta xigta.